डाइटिङ्को दौरानमा कतिबेला के खाने ? यसरी बनाउनुहोस् डाइट चार्ट ! – MediaNP
डाइटिङ् गर्ने व्यक्तिले कम क्यालोरी लिने गरेका हुन्छन् । त्यस्तै खानेकुरा खान पनि एकदमै कम गर्दछन्, यस्तो बानीको कारण उनीहरुको मानव स्वस्थ्यमा निकै नकारात्मक असरहरु देखापरेको हुन्छ, यसैकारण अचानक गम्भिर बिरामी पर्दछन् । यस्तो समस्या हुन नदिनको लागी डाइट प्लान अनुसार चल्नु जरुरी छ । धेरैको यस्तो प्लान अनुसार चल्ने बानीले गम्भीर लगायतका कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या देखिदैन् । यसरी बनाउनुहोस् दैनिकी डाइट प्लानः
१. बे्रक फास्ट ।
बे्रकफास्ट करिब ८ देखि ९ बजे सम्मको बिचमा गरिसक्नुपर्दछ, ब्र्र्रेकफास्टमा करिब १५० मिलीग्राम दुध पिउनुहोस् दुध पिउँदा एक सानो चम्चामा चिनी हालेर दुध पिउने गर्नुपर्दछ । यसको गर्नाले शरीरले करिब २० क्यालोरी प्राप्त हुन्छ । ब्रेकफास्ट गरेको २ घण्टापछि वा ११ बजे एक कप ग्रिन टी पिउनुपर्दछ । प्रतिदिन ३ देखि ४ कप ग्रीन टी सेवन गर्नाले तौल पनि नियन्त्रण हुनेछ ।
लञ्चको लागी एक सानो गिलास गाढा लस्सीमा १ चम्चा चिनी हालेर खान सकिन्छ । यसबाट करिब १०० क्यालोरी प्राप्त हुन्छ । गाढा लस्सीको साथमा गुलियो सलाद पनि सवेन गर्नुहोस्, बेलुका ४ बजे एक कप ग्रीन टी सेवन पनि गर्न सकिन्छ ।
डिनर ८ बजे गर्नु एक उपयुक्त समय हो । डिनरमा सलादको रुपमा गाजर, मुला, काक्रो, टमाटर, भेँडीखुसार्नी मिक्स गरेर खानेगर्नुहोस् । यसको साथमा बदाम, प्रोटिन, भिटामिन युक्त खानेकुरा, मोनोअनसेचुरेटिड फैटी एसिड वा पोलीअनसेचुरेटिड फैटी खान खानुपर्दछ यसले मुटुलाई स्वस्थ बनाई पेट सम्बन्धी समस्या छ भने त्यस्तो समस्या पनि समधान गर्दछ । बिहान तातोपानी पिएपछि बानी अधिकाशको छ । पानी पनि आधा वा एउटा ओखर पनि सेवन गर्न सकिन्छ, साथमा सूर्य नमस्कार योगासन पनि निकै जरुरी छ ।